Madaxtooyada Villa Somaliya oo shaacisay xilliga uu furmayo Shirka DF Somaliya iyo Dowlad goboleedyada dalka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Madaxtooyada Villa Somaliya oo shaacisay xilliga uu furmayo Shirka DF Somaliya iyo...
Madaxtooyada Villa Somaliya oo shaacisay xilliga uu furmayo Shirka DF Somaliya iyo Dowlad goboleedyada dalka
Muqdisho (Halqaran.com) – Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa shaacisay in maalinta Khamiista ah ee soo socoto uu Magaalada Muqdisho ka furmi doono Shir u dhaxeeya dhammaan maamul goboleedyadda iyo dowladda dhexe.
Agaasimaha Warfaafinta ee Madaxtooyadda, Cabdinuur Maxamed Axmed ayaa sheegay in shirkaan lagu dhammeystiri doono Shirkii Dhuusamareeb3.
“Waxaa Villa Soomaaliya ka furmaya Khamiista, 10-ka September shir ay u dhanyihiin Dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaasoo lagu dhammeystirayo hannaanka doorashooyinka dalka, iyadoo uu saldhig u yahay heshiiskii Samareeb-3 (Dhuusamareeb3)” ayaa lagu yiri War kasoo baxay Villa Soomaaliya.
Madaxda dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa maalinta berri shir uga furmi doono magaalada Baydhabo.
Sidoo kale, waxaa magaalada Muqdisho todobaad ku sugan Madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland oo kasoo horjeedda qodobadii kasoo baxay Shirkii Dhuusamareeb3.
Shirka Madaxda dowladda Soomaaliya iyo dowlad goboleeyada dalka